Jehorama (mpanjakan'i Jodà) - Wikipedia
Jehorama (mpanjakan'i Jodà)
(tonga teto avy amin'ny Jorama (mpanjakan'i Jodà))
I Jehorama na Jorama dia mpanjakan'i Jodà nandritra ny valo taona tamin'ny tenantenan'ny taonjato faha-9 tal J.K. Zanak'i Josafata mpanjaka izy. Tsy tokony hafangaro amin'i Jehorama (na Jorama) mpanjakan'i Israely avaratra izy. I Atalia, izay lasa mpanjakavavin'i Jodà taty aoriana, no vadiny ka niterahany ny mpanjaka Ahazia (na Okoziasa) sy i Joseba.
Amin'ny teny hebreo dia יְהוֹרָם / Yehôrām fa amin'ny teny grika dia ᾿Ιωρὰμ / Iôram ary amin'ny teny latina dia Ioram. Manoratra hoe Jehorama ny Baiboly protestanta amin'ny teny malagasy fa ny Baiboly katolika amin'ny teny malagasy kosa dia manao hoe Jorama.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Jehorama_(mpanjakan%27i_Jodà)&oldid=973982"
Voaova farany tamin'ny 6 Septambra 2019 amin'ny 10:43 ity pejy ity.